PenguinsTok Apk Khuphela yeAndroid [TikTok Enye indlela]-Luso Gamer
Nangona abasebenzisi be-Android beqhelene nala maqonga adumileyo akwi-intanethi anjengeTikTok njl.njl. Nangona kunjalo, amaqonga anjalo akwi-intanethi avaliwe kwamanye amazwe. Ukujolisa imiceli mngeni emitsha kunye namathuba, apha sizise iPenguinsTok Apk.
Ngelixa siphonononga usetyenziso nzulu, sifumene izinto ezininzi ezahlukeneyo zepro ezifana namanye amaqonga. Oku akuthethi ukuba bakopa ngokupheleleyo uyilo lonke. Kukho iinketho ezahlukeneyo ezizodwa zongezwa ngaphakathi.
Ezo zibandakanya iThala leencwadi elahlukileyo, imixholo yesiNtu eSininzi, iDashbhodi yokuSeta ngeNgcaciso kwaye akukho nanye enye indlela yokufumana umvuzo. Ewe, ngoku amalungu abhalisiweyo anokufumana imali elungileyo yokwabelana ngeevidiyo ezinetalente. Yiyo loo nto unomdla kwifayile yeapp emva koko faka iPenguinStok App.
Yintoni iPenguinStok Apk
IPenguinStok Apk liqonga lokuzonwabisa elikwi-intanethi elakhiwe ngoonombombiya. Injongo yokwakhiwa kweqonga ibikukubonelela ngenye indlela ekhuselekileyo. Apho amalungu abhalisiweyo anokonwabela ukwabelana ngomxholo wevidiyo eyodwa nababukeli.
Ayizukulunga ukuba sibize eli qonga yeyona ndlela ilungileyo yeTikTok. Nangona singaze sibachase abasebenzisi ukunqanda ukufaka iTikTok. Nangona kunjalo, abasebenzisi abanetalente abazange banike eli thuba lokufumana imali elungileyo ngeqonga.
Ewe, abasebenzisi be-android abanakufumana imali ngokuthe ngqo kwiTikTok. Kodwa xa kufikwa kwiPenguinStok ke abasebenzisi be-android banokufumana lula inzuzo entle Ukufumana iApp. Ekuphela kwento abayifunayo kukufaka nje inguqulelo yamva nje yesicelo ngaphakathi kwe-smartphone ye-Android.
Emva koko ubhalise ngokwabo kunye neqonga enika iziqinisekiso ezichanekileyo. Emva kokugqiba ubhaliso, ngoku fikelela kwideshibhodi ephambili kwaye uqale ukulayisha umxholo. Ukuba ulungele ukufumana inzuzo entle eqongeni ke ufake iPenguinStok Khuphela.
ubungakanani 94 MB
Igama lepakheji com.pv.pvtrades
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo eli qonga lisanda kwakhiwa laziswa ngabaphuhlisi. Abasebenzisi bakholelwa ukuba, iingcali zinikeze inguqulo ye-beta ukujonga amava omsebenzisi. Nangona kunjalo, asiqinisekanga malunga nenguqulelo ye-beta okanye uguqulelo lwesilingo sosetyenziso.
Ukuba baye baphehlelela inguqulelo ye-beta, ngoko abakhe babonelele ngolu khetho luthe ngqo lwengeniso. Ke sihlalutya le meko, siyifumene yeyokuqala kwaye isemthethweni. Khumbula ukuba le nguqulo isebenza kuphela eBrazil naseThailand.
Xa kuziwa ekubhaliseni ngokuthe ngqo kwiqonga. Emva koko inokufuna inombolo yeselula yelizwe. Ngaphandle kokubamba inombolo yeselula, akunakwenzeka ukubhalisa kwiqonga. Khumbula ukuqinisekiswa ikhowudi yokuqinisekisa iya kuthunyelwa ngenombolo yeselula.
Emva kokufaka ikhowudi yokuqinisekisa, ngoku abasebenzisi bavunyelwe ukufikelela kwideshibhodi ephambili. Abo bahlala ngaphandle kwelizwe basenokungakwazi ukubhalisa. Kodwa abasebenzisi bangaphandle banokonwabela umxholo simahla ngaphandle komda.
Ke ngoko ubuchule bakho bokwenza kunye nokuhlela bucacile. Emva koko kuya kufuneka uzame eli qonga litsha limangalisayo. Imbuyekezo efunyenweyo inokurhweba ngaphakathi kwiholo yokurhweba kwaye iguqulwe ibe yimali yokwenyani. Ke unetalente nokuba iyasebenza okanye iyazoba, kuya kufuneka ukhuphele iPenguinStok Android.
Ukufakela usetyenziso kunika zombini.
Ukuzonwabisa kunye nethuba lokufumana imali.
Iividiyo ezipapashiweyo zifikeleleka ngokuthe ngqo ukubukela.
Kuthetha ukuba akukho kubhaliswa kunokufuneka kumxholo wokubukela.
Nangona kunjalo, ukubhaliswa kwemali kuyafuneka.
Ukubhaliswa kwenombolo yeselfowuni kuyafuneka.
I-AI ekwinqanaba eliphezulu isetyenziselwa ukubeka iliso kunye nokubonelela ngomxholo ohambelana nokukhangela.
Uyikhuphela njani iPenguinStok Apk
Okwangoku usetyenziso luyafikeleleka ukuba lukhutshelwe kwiVenkile yoDlalo. Kodwa yahlelwa kwicandelo leprimiyamu kwaye ifuna idilesi ye-IP yelizwe lokufikelela kwisicelo. Oko kuthetha ukuba kuphela izixhobo ezifanelekileyo zelizwe ezivumelekileyo ukukhuphela ifayile ye-app.
Abo bafuna iqonga lokwenyani lokukhuphela ifayile yeApk ngokuthe ngqo. Emva koko sicebisa abo basebenzisi ukuba bandwendwele iwebhusayithi yethu kwaye bakhuphele ifayile yeapp ngaphandle kwemvume. Cofa nje iqhosha lekhonkco lokukhuphela elinikezelweyo kwaye ukhuphele ngokulula ifayile ye-Apk.
Ifayile ye-app esiyixhasayo apha yeyoqobo kwaye ayifuni mrhumo. Ngaphambi kokubonelela nge-app ngaphakathi kwecandelo lokukhuphela, siyifaka kwii-smartphones ezahlukeneyo. Emva kokufaka i-app asikwazi ukubona nayiphi na ingxaki ngaphakathi.
Ukuza kuthi ga ngoku usetyenziso olwahlukileyo lokuzonwabisa kunye nengeniso zipapashwa apha kwiwebhusayithi yethu. Ukuphonononga amanye amathuba angcono nceda ulandele usetyenziso. Ezo zinjalo TikTok 18 Plus Apk kwaye Iifutshane ze-YouTube Apk.
Ukuba indawo okuyo ngoku yiBrazil okanye Thailand kwaye ufuna ithuba le-intanethi. Ukwabelana ngomxholo wetalente yakho nababukeli kunokufumana imali entle ngembuyekezo. Emva koko sicebisa abo bantu banetalente ukuba bafake iPenguinstok Apk.
iindidi ukonwatyiswa, apps tags Ukufumana iApp, PenguinStok Android, PenguinStok Apk, I-PenguinStok App, PenguinStok Khuphela Post yokukhangela